हाकिम रिझाउने १२ कला « M A N O R A N J A N
माथिल्लो तहका कर्मचारीको डेस्क सफा-सुग्घर हुन सक्छ । बाँकीका लागि भने सफा-सुग्घर हुनुको फाइदाभन्दा बेफाइदा बढी छ । किनकि आफ्नो टेबल सफा हुनुको मतलव त्यहाँ खासै काम भइरहेको छैन भन्ने बुझिन्छ । आफ्नो टेबलमा थुप्रै किताबको डकुमेन्टको चाङ लगाउनूस् । कागजपत्र र डायरी छरपष्ट पार्नूस् । टेबल जति अस्तव्यस्त भयो, त्यति तपाइर्ं कामकाजी देखिनुहुन्छ।
डेस्कमै खाजा खाने
आफूलाई बेफुर्सदिलो देखाउने यो अति उत्तम तरिका हो । अरू सहकर्मी खाजा खान होटल-क्यान्टिनतिर लागेका वेला यदि बोस अफिसमै छन् भने उनको मन जित्न यो तरिका काम लाग्छ । तपाईंले भ्याइनभ्याई खाजा खाँदै काम गरेको दृश्यले बोस भावुक बन्नेछन् ।
बोसको कुनै कुराको झुक्किएर पनि आलोचना नगर्नूस् । यसको साटो झुटो तारिफ गर्ने कला सिक्नूस् । आफूले गरेको कुनै नयाँ कामबारे बोसले तपाइर्ंको प्रतिक्रिया मागे भने सम्भिmनूस्, उनले तारिफ मात्रै सुन्न चाहेका छन् । वेला-वेलामा उनको व्यक्तित्व, गेटअपको पनि प्रशंसा गरिदिनूस् । जस्तै, कालो चस्मा लगाएर चिम्पाञ्जीजस्तै देखिएका छन् भने पनि ‘सरलाई कालो चस्मा खुबै सुहाउँदोरहेछ’ भनिदिनूस् । तपाईंको के जान्छ ?
अंग्रेजी घुसाएर बोल्ने
बोससित बढीभन्दा बढी अंग्रेजी घुसाएर कुरा गर्नूस् । नेपाली बोल्दा पनि अंग्रेजी टोन निकाल्ने प्रयास गर्नूस् । धेरै अंग्रेजी आउँदैन भने याया, डेफनिट्ली, लाइक, अफ कोर्स, ओह नो, जस्ता शब्द बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ । डिक्सनरी पल्टाएर भए पनि केही अप्ठ्यारा शब्द घोक्नूस् र त्यसलाई बोसले नबुझ्नेगरी ठाउँ-कुठाउँ प्रयोग गर्नूस् । बोसको अगाडि आफूलाई बौद्धिक देखाउन यो उपाय रामबाण सावित हुनेछ ।
हाँस्ने र सही थाप्ने
हरेक कुरामा सही थाप्ने बानी बसाल्नूस् । ‘यस बोस’ को सिद्धान्त अपनाउनेहरूले नै सबैभन्दा बढी प्रमोसन खान्छन् । त्यसैले झुक्किएर पनि बोसको कुरा काट्ने हिम्मत नगर्नूस् । बोसले स्टाफहरूसित बसेर कुनै चुटि्कला सुनाए भने सबैभन्दा ठूलो आवाजमा तपाईं हाँस्नूस् । हाँस नउठे पनि पेट मिचिमिची हाँसिदिनूस्, तपाईंको के जान्छ ?
घर ढिलो फर्किने
अफिसबाट जतिसक्दो ढिलो फर्किनूस् । बोसभन्दा अगाडि अफिस छाड्ने गल्ती कहिल्यै नगर्नूस् । आखिर चाँडै घर गएर पनि के नै भूकम्प ल्याउनु छ र ? काम गर्नैपर्छ भन्ने छैन, तर अरूभन्दा ढिलासम्म अफिसमा बस्दा तपाईं स्वतः बोसको नजरमा पर्न सफल हुनुहुनेछ ।
डायरीमा नोट गर्ने
बोससित कुरा गर्दा जतिवेला पनि एउटा पेन र डायरी तपाईंसित हुनैपर्छ । उनले चाहे जतिसुकै बेतुके कुरा गरेका किन नहुन्, त्यसलाई कुनै दिव्यवाणी पाएजसरी डायरीमा नोट गरेको देखाउनूस् । यसबाट बोसलाई आफूले निकै गहकिलो कुरा बोलिरहेको छु र त्यसलाई तपाईंले गम्भीरतासाथ लिइरहनुभएको छ भन्ने भ्रम पर्नेछ ।
हाई र खुइय
अफिस टाइममा तपाईंको हाई र खुइयको विशेष अर्थ रहन्छ । कामको तनाब अत्यधिक रहेको देखाउन वेला-वेलामा टाउको समाएर खुइय गर्नु, व्यग्र बन्नु, छट्पटिनु आवश्यक छ । अरूले सुन्नेगरी हाई गर्नाले घरमा पनि अबेरसम्म काम गरेर राम्रोसित सुत्न नपाएको भान पर्नेछ । पसिना नआए पनि वेला-वेलामा रुमालले मुख पुछ्ने गर्दा फाइदा हुन्छ ।
अफिस टाइमभन्दा बाहेक पनि आफू अफिसकै चिन्तामा छु भन्ने देखाउन फोनले सहयोग गर्छ । छुट्टीको दिन फोन गरेर अफिसियल र अनअफिसियल कुराकानी गर्नूस् । फोन राख्नुअगाडि परिवारको हालखबर सोध्नूस् र म्याडमलाई आफ्नो नमस्कार सुनाइदिन भन्नूस् । साथै, नयाँ वर्षदेखि ल्होसारसम्म हरेक ठूला-साना चाडमा फोन गरेर वा एसएमएसबाट शुभकामना दिने गर्नाले फाइदा हुन्छ ।
हतारिएको अभिनय गर्ने
जतिखेर पनि हतारमा रहेको अभिनय गर्नु निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अफिसभित्र यताउता हिँड्दा पनि लगभग दौडिएको जस्तो देखिनुपर्छ । यसबाट तपाईं एक मिनेट पनि समय खेर फाल्न चाहनुहुन्न भन्ने झल्किन्छ । अझ बोसले तपाईंको नाम लिएर बोलाए भने त सासै नफेरी दगुर्नूस् ।
दारु खाँदा नजिकिनूस्
अफिसमा आयोजना हुने कुनै मदिरा पार्टीमा बेस्सरी लागेको अभिनय गरेर तपाईं बोससित अस्वाभाविक रूपमा नजिकिन सक्नुहुन्छ । यस्तो वेला बोसको ढाडमा दुख्नेगरी धाप मार्नुभयो वा गालामा म्वाइँ खानुभयो भने पनि उनले माइन्ड गर्ने छैनन् । ‘लागेको’ वेला बोसलाई बेहिच्किचाहट साथीभाइको जस्तो व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ । पार्टीमा बाहेक अरू वेला पनि बोससँगै दारु खाने मौका खोज्नूस् ।